ShweMinThar: အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် လူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စာအုပ် (၃၀)
အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် လူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စာအုပ် (၃၀)
အင်တာနက်နှင့် ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေက ခမ်းနားကြီးကျယ်သလောက် လူတိုင်းနေ့စဉ်ဘ၀မှာ နေရာ ၀င်ယူလာသည်။ အင်ဖော်မေးရှင်းတွေက ဖောင်းပွလွန်းပြီး၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စာဖတ်ဖို့၊ အလုပ်လုပ်ဖို့၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အချိန်တွေ ပိုပေးလာကြရသည်။
သို့နှင့်တိုင် ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေက မျိုးဆက်တိုင်းအတွက် ကမ္ဘာလုံးချီလေးနက်တဲ့ အတွေးအမြင်ရသပေါင်းစုံ ပေးခဲ့တဲ့ ဂန္တ၀င်စာအုပ်တွေကိုတော့ဖြင့် ဖယ်ရှားပစ်လို့ မရပါ။
အောက်မှာ ကမ္ဘာ့ပညာရတနာသိုက်အဖြစ် တစိတ်တပိုင်း ရည်ညွှန်းနိုင်မည့် စာအုပ်စာရင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အသက် ၃၀ မွေးနေ့ရက် မတိုင်မီ လူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ် (၃၀) ဟု Foreign Policy ဂျာနယ်က ညွှန်းဆိုထားပါသည်။
ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရနှင့် သဘောကို လက်တွေ့နားလည်ဖို့နဲ့ ဥာဏ်အလင်းရရှိဖို့အတွက် နည်းလမ်းရှာဖွေရာမှာ မိမိကိုယ်ကို အားကိုရေးသာ ပဓာနကျကြောင်း တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဆွစ်လူမျိုး ဂျာမန်နိုင်ငံသား ဟာမန်ဟစ် ကရေးပြီး၊ ဆရာပါရဂူ က 'သိဒ္ဓတ္ထ' အမည်ဖြင့် မြန်မာပြန်ခဲ့သည်။
၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် အစိုးရများရဲ့ ကြောက်မယ်ဖွယ် သရုပ်သကန်ကို စာရေးသူက ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ ကြိုတင်ရေးသား သတိပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ လူထုနဲ့ နိုင်ငံသားများအပေါ် အမျိုးမျိုး လိမ်လည်လှည့်စား ထောက်လှမ်းရေးလုပ်တဲ့ 'အားလုံးသိ-အစိုးရတွေ' ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူစရိုက်တွေကို အကောင်းဆုံး ဖော်ပြနိုင်တာကြောင့် ယနေ့တိုင် အမြဲချီးကျူးကြရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာကြီး ဂျော် အော်ဝဲလ် မှာ ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရဲအရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ပြီး၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် နာမည်ကျော် 'မြန်မာပြည် နေ့ရက်များ' စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် အမေရိကန် တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာ လူမျိုးရေးနဲ့ စီးပွားရေး ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ပြဿနာများကို တင်ပြထားသည်။ အဓမ္မပြုကျင့်တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ရတဲ့ လူမည်းတစ်ဦးနှင့် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူ လူဖြူအမျိုးသမီးငယ်တို့ရဲ့ တရားရုံးနောက်ခံအမှု ဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အစွဲအာဃတတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့၊ အတွေးအခေါ်များစွာပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။
4. A Clockwork Orange by Anthony Burgess
၂၀ ရာစု အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ် ၀တ္ထု (၁၀၀)မှာ စာရင်းတင်ခံရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်ရှင်လည်း ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ရူးနှမ်းတဲ့ လူငယ်ယဉ်ကျေးမှု အိပ်မက်ဆိုး တစ်ခုက ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ယောက်ကို အမြဲထိတ်လန့် ကြောက်ရွံအောင် အမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်မှုပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။ အသက် မရှုနိုင်လောက်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး၊ စာဖတ်သူကို အတွေးချဲ့ထွင်မှုများစွာ ပေးနိုင်သည်။
5. For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ရက်စက်တဲ့ စစ်ပွဲ၊ သေခြင်းတရားနဲ့ အိုင်ဒီအိုလော်ဂျီများအပေါ် အားကောင်းစွာ စဉ်းစားတွေးခေါ် တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် စာရေးဆရာ အားနက်စ် ဟဲမင်းဝေးရဲ့ စာအုပ်များနှင့် ၀တ္ထုတိုများမှာ မြန်မာဘာသာပြန် ရှိနေပြီး၊ ယခုစာအုပ်ကို စာရေးဆရာ 'ကိုကို' က 'ခေါင်းလောင်းသံ' အမည်ဖြင့် မြန်မာပြန်ဆိုခဲ့သည်။
ရုရှားစာရေးဆရာကြီး လီယိုတော်လ်စတွိုင်း ရေးသားပြီး၊ ၁၈၆၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဂန္တ၀င်စာအုပ် ဖြစ်သည်။ ရုရှားကို ပြင်သစ်တို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု၊ ဇာဘုရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် နယိုလီယံခေတ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ရုရှား မင်းမျိုးစိုးနွယ်တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ အားကောင်းစွာဖြင့် တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီး ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စာအုပ် (၁၀၀) တွင် ထိပ်ဆုံးမှာ နေရာယူထားသော စာအုပ် ဖြစ်သည်။
7. The Rights of Man by Tom Paine
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ ရှုထောင့်ကနေ လူ့အခွင့်အရေး အယူအဆကို ပထမဆုံး စတင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ သောမစ် ပိန်း ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရာမှာ စာပေရေးသားမှုဖြင့် ကူညီခဲ့သူအဖြစ် လူသိများသည်။
8. The Social Contract by Jean-Jacques Rousseau
ဒီစာအုပ်ကနေ ကျော်ကြားတဲ့ ကိုးကားစရာတစ်ခုက "လူဟာ လွတ်လပ်စွာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ နေရာတိုင်းက သူနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတယ်" ဆိုတာ ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တစ်ဦးချင်းရဲ့ အရေးပါမှု အခန်းကဏ္ဍကို တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၁၇၆၂ ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ရူးဆိုး ရဲ့ "လူမှု ပဋိညာဉ်' စာအုပ်က ပြင်သစ်နဲ့ ဥရောပမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ တော်လှန်ရေးများကို ဖြစ်ပေါ်အောင် လှုံဆော်ပေးခဲ့သည်။
သာမန် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် ဆင်ထားတဲ့ ၀တ္ထုမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ လူယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းကို ပြန်လည် အမှတ်ရခြင်းရဲ့ အရေးကြီးပုံကို အမျိုးမျိုးသော ဇာတ်ကြောင်းပြောပုံစံနဲ့ လှလှပပဖွဲ့ဆို တင်ပြထားတဲ့ ၀တ္ထု ဖြစ်သည်။ ကိုလံဘီယာ စာရေးဆရာက ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ စပိန်ဘာသာနဲ့ ပထမဆုံး ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်း ဘာသာစကား ၃၀ ကျော်ဖြင့် ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
10. The Origin of Species by Charles Darwin
လူသားရဲ့ မူလဇာတ်မြစ်နှင့် သဘာဝလောကနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အတွေးအမြင်အပေါ် ထူးထူးခြားခြား ဂယက်ရိုက်စေခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၁၈၅၉ ခုနှစ်မှာ ရေးသားခဲ့ပြီး၊ ချားလ်စ် ဒါဝင် က လူသားရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ဇီဝဆင့်ကဲတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းကနေ စဉ်းစားပြခဲ့သည်။
11. The Wisdom of the Desert by Thomas Merton
ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘ၀ကို သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ၊ ဘ၀မှာ ကြီးမားတဲ့ စွမ်းအားတွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာတွေအပေါ်၊ သုံးရာစုနဲ့ လေးရာစုမှာ အီဂျစ် သဲကန္တာရထဲ ကျင်လည်ခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်များရဲ့ အတွေးအခေါ် အဆိုအမိန့်များကို စုစည်းတင်ပြထားတဲ့ အမေရိကန် ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး သောမတ်စ် မာတင် ရဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
12. The Tipping Point by Maclolm Gladwell
သေးငယ်တဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခု၊ အယူအဆတစ်ခု၊ ထုပ်လုပ်မှုတစ်ခုက ဗိုင်းယပ်စ်လို ပြန့်နှံပြီး၊ ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ဂလိုဘယ် လူမှုအပြောင်းလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ၊ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ဦးမှာကို တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ စာအုပ်ကော်ပီ ၁.၇ သန်းကျော် ရောင်းခဲ့ရသည်။
13. The Wind in the Willows by Kenneth Graham
အင်္ဂလန်ဘဏ် အငြိမ်းစား အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ၁၉၀၈ ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ကလေးစာအုပ် ဖြစ်သည်။ ကလေးစာပေထဲတွင် အကောင်းဆုံး ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းအဖြစ် ရည်ညွှန်းခံရပြီး၊ ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ဖို့၊ ရဲဝံ့စွန့်စားဖို့၊ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ် ရှိဖို့အတွက် လူမဟုတ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်များဖြင့် တင်ပြထားသည်။
14. The Art of War by Sum Tzu
စစ်ရေးမဟာဗျူဟာနဲ့ နည်းဗျူဟာများအတွက် ရှေးအကျဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။ စစ်ရေးသာမက၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါ အောင်မြင်အောင် မဟာဗျူဟာချမှတ်နိုင်ဖို့ လမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်း တရုတ်စစ်ရေးကျမ်းစာအုပ် ဖြစ်သည်။
15. The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien
၂၀ ရာစု အင်္ဂလိပ်စာပေသမိုင်းမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးနဲ့ ဩဇာအကြီးဆုံး ၀တ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ကို ကိုင်ကြည့်ရုံနဲ့ တစ်အုပ်လုံး ပြီးအောင် ဖတ်ဖြစ်အောင် စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး ချားလ် ဒစ်ကင်းစ် ရဲ့ ရှစ်အုပ်မြောက် စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ၁၈၅၀ ခုနှစ်မှာ စတင် ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒစ်ကင်းစ် ကိုယ်တိုင်က "မိဘအများစုလိုပဲ၊ သားသမီးအများကြီးထဲက တစ်ယောက်ကို အချစ်ဆုံး ဖြစ်တတ်သလို၊ ကျနော်လည်း ရေးသမျှတွေထဲက ဒေးဗစ်ကော်ပါးဖီးလ် ကို အနှစ်သက်ဆုံးပဲ" ဟုဆိုသည်။ ဒေးဗစ်ကော်ပါးဖီးလ် ရုပ်ရှင်၊ တီဗီ၊ ပြဇာတ်များ များစွာရှိပြီး၊ စာရေးဆရာ ဒစ်ကင်းက ဂဏှာမငြိမ်တဲ့ နှလုံးသားကနေ မှားယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို စောင့်စည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိဖို့ တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
17. Four Quartest by T.S Eliot
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာစကားပြေ လေးပုဒ်ကို စုပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မော်ဒန်ခေတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကဗျာစကားပြေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။
18. Catch-22 by Joseph Heller
၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် သရော်စာရေး စာရေးဆရာ ဂျိုးဇက် ဟဲလ်လာ ရေးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစု အကောင်းဆုံး လက်ရာ စာရင်းဝင် စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဗျူရိုကရေစီ စနစ်ကို သရော်ဝေဖန်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ စာအုပ်နာမည် Catch-22 မှာ အနောက်နိုင်ငံများတွင် နေ့စဉ်သုံး ဗန်းစကားတစ်ခုအထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များမှ ဂျက်ဇ် တေးဂီတခေတ်ကို နောက်ခံထားပြီး၊ နာမည်ကျော် 'အမေရိကန် အိပ်မက်' ကို တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေများစွာရှိတဲ့အနက်၊ မိတ်ဆွေကောင်း အနည်းငယ်က ပိုတန်ဖိုးရှိပုံမှာ စာဖတ်သူများအတွက် သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး၊ ဘ၀မှာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာကို ထမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် စာရေးဆရာ ဂျေဒီ ဆလင်းဂျာ က ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ရည်ရွယ်ရေးတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်တို့ရဲ့ အကြောက်၊ စိုးရိမ်သောက၊ အာခံပုန်ကန်လိုစိတ်တို့ရဲ့ အတက်အကျကို ဖော်ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖော်ပြနိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ကာရာမာဇော့ဗ် ညီအစ်ကိုများ စာအုပ်ရေးသူ၊ ရုရုားစာရေးဆရာ ဒေါ့စတိုယဗ်စကီး က ဆာဘီးယားမှာ ပြည်ပြေး ၅ နှစ်နေပြီးနောက် ရုရှားကိုအပြန်၊ ၁၈၆၆ ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဒေါသ၊ ကိုယ့်ကျင့်တရား ပြဿနာနဲ့ ငွေအတွက် လူသတ်လိုမှုတွေကို ဖော်ပြတဲ့ ၀တ္ထုကောင်း ဖြစ်သည်။
22. The Prince by Niccolo Machiavelli
အာဏာနှင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖော်ပြတဲ့ နာမည်ကြီး စာအုပ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအာဏာမှသည် ကော်ပိုရေးရှင်းလောကအထိ ရာထူး၊ ဩဇာ၊ နေရာ ရရှိဖို့ ရုန်းကန်ကြိုးစားရာမှာ၊ အီတလီ သမိုင်းနဲ့ ဒဿနပညာရှင်ရဲ့ ၁၅၁၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖြန့်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကို လေ့လာဖို့ လိုအပ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
23. Walden by Henry David Thorean
ဟင်နရီ ဒေးဗစ် သော်ရိုးက ဒီစာအုပ်ကို ရေးဖို့အတွက် အမေရိကန်၊ မက်ဆာချူးဆတ်စ် ပြည်နယ် ကွန်ကော့ဒ်မြို့ရှိ ၀ဲလ်ဒန် ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ရွက်ဖျင်တဲထိုးပြီး နှစ်နှစ်၊ နှစ်လနဲ့ နှစ်ရက် အချိန်ယူ ရေးခဲ့သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖိအားတွေကနေ အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။
ဒီစာအုပ်မှ ကျော်ကြားတဲ့ စာသားတစ်ခုကတော့ "လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှင်လိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ငါ တောထဲကို သွားခဲ့တယ်။ ဘာတွေ သင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာ ငါကြည့်ခဲ့တယ်။ ဘာမှ သင်ယူစရာ မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့၊ ငါသေခါနီးမှာ ငါရဲ့ ဘ၀ကို ကောင်းကောင်း မရှင်သန် မနေထိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်"
24. The Republic by Plato
ဘ၀ကို ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲ၊ တရားမျှတမှုကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်လဲ၊ သူရသတ္တိဆိုတာ ဘာလဲ၊ ခေါင်းဆောင်တွေက ဘယ်လိုဦးဆောင်မှုပေးသင့်သလဲ စတဲ့ အချေအတင် ဆွေးနွေးထားချက်များကို ဂရိဒဿနပညာရှင် ပလေတို က တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပလေတိုက သူ့ဆရာ ဆော့ခရတ္တိ ကို ခေါင်းဆောင်တင် ရေးသားထားပြီး၊ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံရေးသီအိုရီကို နားလည်ဖုိ့အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ ဆရာဇော်ဂျီ က ပလေးတိုးနဒါန်း အဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
25. Lolita by Vladimir Nabokov
ရုရှားစာရေးဆရာ နဘိုကော့ဗ် က ၁၉၅၁ ခုနှစ် ပြင်သစ်မှာ အင်္ဂလိပ်လို ရေးခဲ့ပြီး၊ နောက်မှ ရုရှားဘာသာကို ပြန်ခဲ့သည်။ အချစ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖောက်ပြန်မှုနှင့် ဘ၀ခံစားချက်များအပေါ် ပဋိပက္ခဖြစ်မှုကို အမြင်ကျယ်ကျယ် ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
26. Getting Things Done by David Allen
အမေရိကန် စာရေးဆရာ ဒေးဗစ်ဒ် အလန် က သူ့စာအုပ်နာမည်အတိုင်း Getting Things Done (GTD) ဆိုတဲ့ အတိုင်ပင်ခံ (consultant) အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်း ထောင်ထားသည်။ သူ့အယူအဆတက လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ထဲမှာ မှတ်သားထားတဲ့ အရာရာကို ဖယ်ရှားပြီးမှသာ အလုပ်စတင်ဖို့လိုတယ်။ လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး ဖိစီးနေတဲ့ အရာရာကို စိတ်ထဲက ဖယ်ထုတ်ပစ်မှာသာ၊ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက် အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားသည်။
27. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie
အောင်မြင်ရေး တက်ကျမ်းစာအုပ်များထဲတွင်တော့ အကြီးကျယ်ဆုံး စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆက်ဆံမှုများတွင် ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် သိမ်းယူစွဲဆောင်နိ်ုင်ဖို့အတွက် အလွယ်တကူ ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဦးနုနှင့် ဗမိုးတို့က မြန်မာပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
28. Lord of the Flies by William Golding
၄င်းစာအုပ်နာမည်နှင့်ပင် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ လူသားရဲ့ အကြင်နာတရားနဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားနေရာတွင် မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်စိတ်များ ၀င်လာပြီး၊ ဥပဒေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်မှုနဲ့ ကြောက်မယ်ဖွယ် ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
29. The Grapes of Warth by John Steinbeck
ဆရာမောင်ထွန်းသူက 'ဒေါသမာန်' အမည်ဖြင့် ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ အမေရိကန် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း ကာလမှာ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းမိသားစုများရဲ့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် အရူးအမူး ရှာကြပုံကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန် အထက်တန်းကျောင်းများတွင် ဂန္တ၀င်စာပေ သင်ကြားရေးအတွက် မကြာခဏ ပြဌာန်းသောစာအုပ် ဖြစ်သည်။
30. The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov
ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုကြား ပဋိပက္ခလွန်ဆွဲမှုကို ဖော်ပြရင်း ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး တင်ပြထားတဲ့ ရုရှား ၀တ္ထုဖြစ်သည်။ လောဘ၊ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ လိမ်လည်လှည့်စားမှုများမှာ လူ့သဘာဝနှင့် ဆက်နွယ်နေကြောင်း တင်ပြတဲ့ စာအုပ်လည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုဗီယက်ခေတ်ကို သရော်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး လန်ဒန်တိုင်းမ်း သတင်းစာက ၂၀ ရာစုရဲ့ အကောင်းဆုံးဝတ္ထုတစ်အုပ်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။
Posted by Alex Aung at 8:05 PM